Madaxwaynihii Xukunka Laga Tuuray Ee Dalka Suudan Cumar Al Bashiir Oo Lagu Soo Oogay Danbiyo Culus Iyo Nuucyada Danbiyadaasi
14/05/2019 (BNN) Xeer illaalinta dalka Suudaan ayaa sheegtay inay danbiyo horleh kusoo oogtay Madaxweynihii xilka laga dajiyey ee Cumar Al Bashiir iyo qaar kamid ah saraakiishii la shaqeenaysay oo lagu eedeeyey inay ka danbeeyeen dilalkii ay askarta u geysteen dadkii waday banaanbaxyadii looga soo horjeeday dowladiisa.
Cumar Al Bashiir ayaa xilka looga tuuray inqilaab militari 11kii April, kadib todobaadyo mudaharaadyo ay wadeen shacabka oo xiray wadooyinka waaweyn ee caasimada.
Dacwada iyo kiiska xeer illaalinta sheegtay inay kusoo oogtay Cumar Al Bashiir ayaan wax faah faahin ah laga bixin, iyadoo oo uu xafiiska xeer illaalinta horey u sheegay inay Madaxweynihii hore su’aalo ka weydiinayaan arrimo la xariira musuq maasuqa / lunsashada hantida Qaranka iyo Maalgelinta kooxaha argagaxisada ah.
Cumar Al Bashir ayaa hada ku xidhan xabsiga sida weyn loo illaalsho ee Kobar oo ku yaal magaalada Khartuum.
Warkan xeer illaalinta kasoo baxday ayaa lagu soo beegay xili ay Isniintii shalay militariga rasaas ooda uga qaadeen dadka weli sii wada mudaharaadka ee xiray wadooyinka Khartuum, waxaana la sheegay in ay dhaawacmeen ugu yaraan 10 qof oo rayid ah.
Militariga xilka la wareegay iyo ururada rayidka ah ayaa weli isku khilaafsan qaabka loo sii maamuli doono dalkaasi, iyagoo aan weli ku heshiin wakhtiga militariga xilka ku wareejinayo xukuumad shibil ah iyo awood militariga kusii lahaan doono xukuumada dalkaasi.